Ahoana ny fomba hanaovana antso FaceTime amin'ny fitaovana Android na Windows | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hanaovana antso FaceTime amin'ny fitaovana Android na Windows
Miguel Hernandez | 25/09/2021 10:00 | iOS, iOS 15, iPhone, Fampianarana sy torolàlana
FaceTime Nahazo fampiasa maro tamin'ny fahatongavan'ny iOS 15 sy iPadOS 15, mieritreritra izahay fa ny fifandraisan-davitra atolotry ny areti-mifindra dia misy ifandraisany amin'izany, indrindra raha jerentsika ny fahatongavan'ireo rindranasa toa ny Zoom izay nampivadika izao tontolo izao "mijanona" antso an-tsary hatreto.
Iray amin'ireo zava-baovao ateraky ny FaceTime miaraka amin'ny iOS 15 sy iPadOS 15 ny fahafahana manao antso mora amin'ny fitaovana Android na Windows mora foana ihany koa. Jereo miaraka aminay ny fomba hanaovana antso FaceTime farany amin'ny olon-drehetra, tsy maninona na manana iPhone, Samsung, Huawei ary na Windows aza.
Ity dia singa iray izay niresaka tsy tapaka tao amin'ny fantsona YouTube anay, tao amin'ny horonan-tsarimihetsika sy torohevitra iOS 15 hitanao ny fomba hanararaotana an'io fampiasa io. Raha ny tena izy, ny fifandraisana amin'ny mpampiasa Android na Windows amin'ny alàlan'ny FaceTime dia mora mahagaga, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manokatra FaceTime ary eo amin'ny efijery an-trano ny bokotra dia hiseho eo amin'ny ankavia ambony izay milaza hoe: Mamorona rohy. Raha tsindrio ity bokotra ity dia hisokatra ny menio ahafahantsika mizara rohy FaceTime amin'ireo rindranasa samihafa.
Ary eto ambany ihany dia hitantsika ny sary masina maintso milaza hoe: Manampia anarana. Amin'izany no ahafahantsika manampy lohateny manokana amin'ny rohy FaceTime ary hanamora ny fahafantaran'ireo mpampiasa azy izany. Azontsika atao ny mizara ny rohy FaceTime amin'ny alàlan'ny rindranasa lehibe toy ny Mail, WhatsApp, Telegram na LinkedIn. Ny fiasan'ny AirDrop aza dia miseho ao anatin'ny fahafaha-manao zavatra, zavatra izay tsy mitsahatra ny manaitra ahy raha jerena fa natao ho an'ny fitaovana tsy Apple ary AirDrop dia tsy mifanaraka amin'ireo.
Izany no fomba tsotra ahafahanao mamorona session FaceTime miaraka amin'ireo mpampiasa anao na inona na inona fampiasana iOS, iPadOS, macOS, Android na Windows.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Ahoana ny fomba hanaovana antso FaceTime amin'ny fitaovana Android na Windows
Ny lohateny dia tokony hiteny hoe:
«Ho an'ny fitaovana Android na Windows»
Raha tokony ho:
"Miaraka amin'ny fitaovana Android na Windows"
Mety kokoa amin'ny hevitry ny lahatsoratra izany.
Apple dia namoaka ny iOS 12.5.5 ho an'ny iPhone sy iPads lova hanamboarana ny fampiasana Pegasus
Apple dia mieritreritra ny hanodina ny iPad Pro ary hanao azy io ho marindrano